28 Unofanira-edza Zvikafu uye Zvinwiwa Paunoshanyira Barbados
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » 28 Unofanira-edza Zvikafu uye Zvinwiwa Paunoshanyira Barbados
Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
28 Unofanira-edza Kudya neZvinwiwa Paunoshanyira Barbados - mufananidzo unofambiswa ne fanfo shutterstock com
Vanhu vanozvizivisa nenyika ye Barbados, kazhinji vanozvidaidza kuti "Bajans". Bajans vanhu vanozvikudza, uye iwe unogona kutaura izvi nenzira yavanotakura ivo pachavo, rudo rwavo kuchitsuwa chavo, uyezve iyo zvinoshamisa zvemunharaunda madhishi anonakidzwa nevagari vemo uye vashanyi zvakafanana. Urwu rudo runoshandura kune chiitiko chakanakira kune vese vanoshanyira chitsuwa, vanozviwanira vega chikonzero nei maBavans vachinyanya kuda nyika iyo yavanoti kumba.
Iko kune chekudya, Bajan cuisine iri chaizvo inovhengana poto yetsika. Zvinonhuwira zvinobva munzvimbo dzakaita se Africa, Portugal, neIndia zvinomira pachena, uye kune zvekare zvinofarirwa neIrish, Creole, neBritish izvo zvinoonekwa kunyange nekunaka, kunopisa kwakasanganiswa. matsva zvigadzirwa uye mishonga yemumba-yakasimwa nezvinonhuwira Mukubika kwavo, zvinoreva kuti kunyangwe iwe uchifunga kuti wakamboedza chimwe chinhu zvisati zvaitika, iwe unogona kunge uchiri kushamisika nekushandurwa kwayo kweBavan uye kukwidziridza!
Pazvose zvekudya zvinonakidza pachitsuwa ichi, hove dzegungwa dziri kumwe kumusoro kumusoro maererano nemukurumbira, uye iwe unowanzoona zvinhu zvakaita sehove, shrimp, hove, mazai egungwa, uye crab pane menyu. Kunze kwaizvozvo, zvimwe zvezvinhu zvaunoona zvinogona kunge zvisina kujairika, sekumaresitorendi mazhinji emuno, chikafu chemuno chinowanzo kuverengerwa mumenu.
Kana iwe uri kuronga kuenderera mberi zororo kuBarbados, pudding uye souse, pepperpot uye cou the cou ndizvo zvimwe zvezvinhu zvauchazoda kuti uzive pamberi pezororo rako, uye apo iwe paunoverenga pane iwe unodzidza zvishoma nezvazvo zvinopinda mune izvi zvinoshamisa zvakasarudzika Bajan madhishi ayo anonyatso chengetedza iwe kudzoka kune zvimwe!
Gumi echinyakare Bajan main ndiro
mufananidzo neruremekedzo rwezvinyorwa zvepamusoro - Shutterstock.com
Hove dzemarudzi ese dzakakurumbira pakati pezvitsuwa, izvo zvinoita kuti zvisatoshamise izvo hove dzinobhururuka, nerutivi rwecou cou, ndiyo yenyika dhishi reBarbados. Tichifunga nezvekuti hove dzinobhururuka zvakare ndiyo hove dzinozivikanwa kwazvo pachitsuwa, zvinotsanangura zvinotoenderera mberi nei chikafu ichi chichifarirwa zvakanyanya nevanhu veko vane nzira dzakasiyana dzekuchigadzira. Kazhinji kazhinji, iwe unozviwana padyo ne cou cou, chinova chibage chakabikwa ne okra nemvura (zvimwe pane echinyakare Bajan divi dhishi cou cou gare gare muchinyorwa chino). Kukanya, kubika, kubheka, kana kunhonga ndiyo nzira dzakakurumbira dzekugadzirira hove dzinobhururuka muBarbados, uye kunyangwe hazvo zvinhu zvekugadzira chikafu ichi zvichiramba zvakafanana, mwaka unosiyana zvichienderana nekwaunowana. Zvakangodaro, ndechimwe chezvinhu izvo zvausingafanire kusiya Barbados usina kuyedza.
mufananidzo neruremekedzo rweFanfo - Shutterstock.com
Hove keke chikafu chinonaka cheCaribbean, uye senge mune zvimwe zvitsuwa zviri muBarbados, zvinogadzirwa nekuzvirova uye nekudzipisa zvakanyanya. Kuzadza kazhinji inoumbwa nekodhi yemunyu kana hove chena uye musanganiswa wemishonga nezvinonhuwira. Iwe hauzove nenguva yakaoma kuwana makeke ehove muBarbados; anowanikwa kubva kune vazhinji vevanotengesa chikafu veko, uye kunyangwe kune mamwe maresitoreti epamusoro echitsuwa ichi. Vamwe vanhu vanodya makeke avo ehove nepepper inopisa kana mayonnaise padivi, vamwe vachigadzira sangweji inonzi “Chingwa uye zviviri” nemakeke avo ehove, uye izvi zvinoitwa nekumisikidza keke yehove yakakangwa muchingwa chechingwa ne pepper muto.
mufananidzo nerubatsiro rwe gkrphoto - Shutterstock.com
Ndiani anokwanisa kuramba inonaka nyama yehuku? Iwe unogona kunge wakamboedza huku curry pamberi, asi chii chinoita kuti ndiro iyi iwedzere kukosha muBarbados ndiyo siginecha Bajan mwaka, iyo inowedzera musanganiswa wakakwana wezvinonhuwira, uye hupfumi hwakazara. Curry yakanakisa pamusoro pemupunga wakajeka, nekavira macaroni pai kana muchingwa chakatsetseka… uye mune yekupedzisira nyaya iyi yaizozivikanwa sehuku roti. Idzi ndidzo nzira dzakakurumbira dzekuishandira, asi huku yenyuchi yakanyatsoita zvekuti iwe unogona kuibatanidza neinenge chero divi reVaJavan.
Bajans vanoziva chikafu chakanaka, uye Barbados chimwe chezvitsuwa zveCaribbean zvine hunyanzvi hwepepperpot. Iwe unowana nyama yemarudzi ese mune yakasarudzika Bajan pepperpot stew, kusanganisira nyama yenguruve, nyama yemombe, nyama yemombe, uye zvimwe. Bajan zvinonhuwira uye mhiripiri inopisa uyai nechingwa pamwechete, uye mhiripiri iri inowanzoshandiswa pamwe chete nemupunga kana chingwa. Iyo inozivikanwa yezororo dhishi, asi iwe unogona zvakare kuiwana kune mamwe maresitorendi emuno gore rese. Kana iwe ukaronga nezvekugadzirisa chikafu ichi kumba, ramba uchifunga kuti chinonyanya kushanda pakudya kwemhuri, kana kumafaro, nekuti pepperpot inowanzo bikwa muhukuru hwakakura.
Jug jug ndeimwe yemafaro emwaka anoita kuti vanhu vafare kuzororo, uye inogona kufananidzwa nechikafu cheScotland chinonzi haggis. Chinyakare jug jug inogadzirwa neguinea chibage furawa, hangaiwa pizi, munyu wenyuchi brisket, ham kana imwe nyama ine munyu, nyama yenguruve kana huku, hanyanisi, uye mamwe maruva nezvinonhuwira. Pepper inosarudzika. Bajans vane hanya zvakanyanya nezvekuti dhishi iri rinoitwa sei, uye jug jug yakakwana inofanana nekuenderana kweCou Cou, uye kwete muto wenguva dzose. Vamwe vanhu vanofarira kugadzira chikafu ichi, kuchichiisa mufiriji, uye kuchidziisa nekuchishandira zuva rinotevera.
Usatombo kunetseka, haisi mhuka dzinotamba uye dzinoshamisa dzemumvura dzinobhururuka nevanhu zviuru zvemakiromita kuCaribbean kunoshambira mugungwa ratiri kutaura nezvaro pano. Kana zvasvika pakudya, Mahi Mahi kana Dolphin muBarbados inoreva hove inozivikanwa yemitambo iyo maBajans anowanzo shandira pan-seared kana kusviba. Nzira yakanakisa yekuita izvi ndeye parutivi rwefry, kana nechikafu chakazara chinosanganisira mupunga wakarungwa, nyemba, uye saradhi nyowani.
Pudding uye Souse
mufananidzo neruremekedzo rwe peji Frederique - Shutterstock.com
Pudding muBarbados inoreva mbambaira dzakabikwa dzakagadzirwa nehanyanisi, munyu uye mhiripiri. Souse yakasanganiswa yenguruve dhishi. Iyo pudding inoshanda sekuzadza kweakachekwa nyama yenguruve, uye iwo maviri akasanganiswa zvine hunyanzvi kumagumo mhedzisiro iri kuputika nekuravira. Pudding uye souse ndeimwe yemidziyo inodiwa kwazvo muBarbados, uye uriko iwe unogona kuyedza nemusiyano kutapira nekusiyana kwezvinonhuwira kuti uone chaunoda zvakanyanya. Kunyangwe pudding uye souse zvinogara zvichidikanwa zvakanyanya, zvinogona kutora vamwe kukumbira kwakatenderedza kuti vawane yakanakira nzvimbo yekutora iyi. Paunenge usina chokwadi enda kune mutengesi pamwe nechaunga chikuru!
mufananidzo neruremekedzo rweEQRoy - Shutterstock.com
Roti inozivikanwa muCaribbean, uye chinhu chakajairika mumenu muBarbados. Iwe unogona kuwana roti yemarudzi ese akasiyana pachitsuwa, yakashongedzwa nemishonga yemuno nezvinonhuwira. Funga nezvayo iyo shanduro yechitsuwa che burrito uye unakirwe nacho nechinhu chero chipi zvacho kubva kumatata akatsemurwa uye kuzadzwa kwemuriwo, kune huku, nyama yemombe uye hove dzakasiyana Edza yemuno Chefette yekutsanya-chikafu mubatanidzwa wekukurumidza roti uchienda.
Yakabatwa Nguruve Miswe
mufananidzo neruremekedzo rwePadchara Krungsri - Shutterstock.com
Idya iyi haina kushamisa sezvingaite, uye haufanire kunetseka nezvekuguma uine muswe wenguruve izere mundiro yako. Saizvozvo, vanhu vazhinji vanozvifananidza nembabvu dzakabikwa maererano nekutaridzika uye kuravira, kunyanya kana yakazadzwa nebarbeque muto. Vasati vasvika mundiro yako, BBQ yenguruve miswe ingadai yakave yakabikwa, yakabikwa, uye yakakandwa kwakatenderedza mune inonaka barbeque muto. Kana iwe ukaona izvi pane menyu, ivo zvechokwadi vanokodzera kuyedza.
Brown stew huku iri pamoyo weCaribbean chikafu. Iyi huku yekuku, yakabikwa nzira yeCaribbean, inozivikanwa zvekuti yakapinda munzira yepasi rose, kushandirwa kumusoro kumaresitorendi eCaribbean pasirese. MuBarbados iwe unogona kuyedza yechokwadi vhezheni yeiyo yakasarudzika dhishi, yakaitwa zvirinani kune chokwadi chekuti zvemuno zvinonhuwira uye zvimwe zvinwiwa zviripo kune vese vanozvigadzira. Iwe unogona kuwana brown yakabikwa huku pane dzinenge dzese nzvimbo dzekudyira mutaundi. Usakanganwa kukumbira imwe gravy!
Mashanu echinyakare Bajan mativi madhishi
Vagari vemunharaunda vanogadzira iyo inozivikanwa cou cou dish ne chibage uye okra, kana chingwa chechingwa uye mabhanana akasvibira. Vamwe vanhu vanozvifananidza ne grits. Cou cou chimwe chikamu cheBarbados 'yenyika dhishi, uye zvinoshamisa kuti zvakare chikafu chenyika cheBritish Virgin Islands, US Virgin Islands, uye Antigua. Ndiro inonzi ine mavambo nevagari vemuAfrica mudunhu iri, uye muBarbados iyi ndeimwe divi dhishi iwe yaunowanzo kuwana pane yako ndiro.
mufananidzo neruremekedzo kubva pane yangu maonero - Shutterstock.com
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chinonaka chekudya uri muBarbados iwe chaunogona kudzokerazve nyore kudzoka kumba, mabheki isarudzo huru. Zvese zvauchazoda ndizvo furawa, shuga, nutmeg, uye zvinonhuhwirira zveBajan, iyo yaunogona kutora pamusika weko panguva yako pachitsuwa. Kamwe iyo batter yekubheka yabatanidzwa, ndizvozvo yakadzika yakakangwa kusvika yendarama shava. Kamwe ikabikwa, makeke anogona kupihwa pachena, nehove makeke, sedivi rehove kana barbeque madhishi, kana nechinhu chero chaunoda chakaputirwa mukati.
mufananidzo neruremekedzo rwaMabelin Santos - Shutterstock.com
Bajan mupunga nemapizi anoenda nechero chinhu, asi inowanzo shandiswa nehove dzakabikwa. Pachitsuwa ichi, mupunga nemapizi zvinoreva chete hangaiwa pizi nemupunga. Iyo yekubika nzira yemupunga nemapizi iri nyore; mapizi anotanga kubikwa nemwaka, uye mupunga unowedzerwa mushure. Vamwe vanhu vanosarudza kuzviita bikai mupunga nemukaka wekokonati kuti muupe hunyoro uye hunonaka. Sezvo mupunga nemapizi zvichimisikidza hwaro hwechikafu chinonaka, kunyatso kukosha!
Iwe unogona kungodanana nemacaroni pie muBarbados sezvo iine kushingaira kwakanyanya kupfuura yakajairwa mac uye chizi. Macaroni pie inowanzoshandiswa nehove dzakabikwa, pamwe chete nenyama dzakakangwa kana dzakabikwa. Zvishongedzo zve Bajan macaroni pie zvinosanganisira tubed macaroni, grated cheddar chizi, mukaka wakasviba, ketchup, yero mustard, hanyanisi, zai uye chingwa. Izvo zvinongedzo zvese zvinoiswa mune casserole dhishi uye zvakabikwa. Kana chikafu ichi chaitwa mushe, chakapfuma zvakanyanya, uye zvinogona kungova chinhu chakanakisa chawakaravira muhupenyu hwako.
mufananidzo nerubatsiro rweEkkalak Ngamjarasvanij - Shutterstock.com
Ichangobikwa uye inonaka, zvisinei iwe unofunga kuidya, chingwa chemunyu isarudzo yakanaka kwazvo yemanheru rolls kana vanocheka. Kunyangwe mhando yechingwa inotapira ichisarudzika muBarbados, chingwa chemunyu chine nzvimbo yacho, uye vagari vemo vanonakidzwa nacho sechikafu, sangweji, kana sedivi. Kunyangwe zita racho richiratidza neimwe nzira, Chingwa chemunyu hachisi munyu kupfuura chingwa chenguva dzose, asi iri kana ichienzaniswa nezvimwe zvinotapira chingwa.
Shanu echinyakare Bajan tudyo
mufananidzo neruremekedzo rwaJoe Gough - Shutterstock.com
Vanocheka vanongoita sandwiches akapusa akagadzirwa nechingwa chemunyu. Kugadzira izvi, mupumburu wechingwa chemunyu unochekwa nepakati kuti uwane nzvimbo yekupinza sarudzo yako yekuzadza mukati. Kuzadza kunosanganisira zai, sausage, ham, kana hove - asi iwe unogona kuisa zvakaringana chero chinhu chaunoda muchingwa chemunyu. Chingwa chemunyu chinogona kudyiwa zuva rese, uye iwe uchachiwana munzvimbo zhinji dzekudya dzemuno. Spice yako kumusoro nedash yemhiripiri yemuno.
Dhonzai murwendo rwenyu rwekutsvagisa kwekudya muBarbados necokie, inodiwa-yakawanda yeByanan snack. Nechibage pazasi payo, conkie chikafu chinodyiwa chinonyanya kufarirwa kwakakomberedza zuva rechitsuwa cheIndependence iro rinoonekwa gore rega musi waNovember 30. Kunze kweupfu hwegorosi, zvimwe zvinoshandiswa pakudya kwemuno zvinosanganisira manhanga, mbambaira, kokonati yakakangwa, uye mazambiringa akaomeswa; izvi zvese yakabikwa mumashizha ebhanana akaputirwa uye akasungwa. Kunyangwe iwe usingakwanise kuzviona kazhinji kazhinji mukati megore, dzimwe nguva unogona kuzviraira kubva kune dhizaini yemuno.
mufananidzo neruremekedzo rwaIuliia Timofeeva - Shutterstock.com
Guava chizi kurapwa chaiko, usango tarisira kuti itarike kana kuravira chero chinhu chakajairwa chizi hazvo; ruvara rwayo nderwe crranberry, uye iine fudge-kunge chitarisiko. Guava chizi inotapira nekamwe kacitrus. Yakagadzirwa nekubatanidza guava pulp neshuga, jimu rerimu, nezvimwe zvinoshandiswa. Guava chizi dzimwe nguva inodyiwa nechingwa chemunyu, kana yega.
mufananidzo nerubatsiro rwe ngoc tran - Shutterstock.com
Chingwa chechingwa chechingwa chechingwa chinouita kuti usiyane nemimwe michero, uye maratidziro ayo akasarudzika zvinoreva kuti naiyo haina kuzomboshumirwa mumudziyo wemichero. MuCaribbean chingwa chechingwa chinoonekwa sechikamu chepasi, pamwe nezvinhu zvakaita sam, dasheen nezvimwe zvakadaro. Kune nzira dzakasiyana dzekubika chingwa, uye vanhu vazhinji vanosarudza kuibika kana kuibika kana kuiita machipisi. Chingwa chechingwa chinonaka pamwe chete nehove yakabikwa, kana huku yakasviba nyama.
mufananidzo nerubatsiro rweareeya_ann - Shutterstock.com
Paw paw chibereko chinonakidza nechinonaka chemusango. Vanhu vazhinji vanozvitsanangura semango-bhanana-macitrus musanganiswa wakanaka kwazvo. Paw paw yakafuma mune antioxidants, vitamini C, magnesium, iron, uye zvimwe zvinovaka muviri. Iyo ine pfupi pfupi pasherufu hupenyu, zvinoreva kuti mukana wako wakanakisa wemhando dzakasiyana siyana dzinogona kunge dziri pachitsuwa. Edza muchero wemuno wemichero nemiriwo kuti utore paw paw paunenge uri muBarbados.
Vatatu echinyakare Bajan madhiri
mufananidzo neruremekedzo rweMAZM MAZM - Shutterstock.com
Chingwa chinotapira, inozivikanwawo sekuti Bajan coconut chingwa, ndicho chinonyanya kudyiwa mudzimba zhinji dzeva Bajan kunyanya panguva yeKisimusi, kana pane dzimwe nhambo dzakakosha. Mukati me crispy crust yechingwa ichi iwe unowanzo kuwana mazambiringa akaomeswa, coconut chunks, uye cherries. Kokonati chingwa chinotaridzika senge chero chimwe chingwa chechingwa, asi chinotapira chinotapira iwe une chokwadi chekuchida.
mufananidzo neruremekedzo rwaShirley Phoon - Shutterstock.com
Poni yemufarinya inoitwa ne chando chakakangwa mufarinya nekokonati. Iyo dhizeti inogutsa rako rinotapira zino, pasina kunyanyisa kutapira. Poni yemufarinya inozivikanwa nekuomerera kwayo uye gooey dhizaini, uye inonyanya kutsanangurwa sekusanganiswa kwekeke uye pudding. Zvimwe zvinoshandiswa mune ino dhizeti zvinosanganisira mbatata yakakangwa, sinamoni, nutmeg, uye dzimwe nguva karoti uye mazambiringa akaomeswa.
Bajan Nhema Keke
mufananidzo neruremekedzo rwevm2002 - Shutterstock.com
Kugadzira Bajan Nhema Keke inzira inosanganisira kunyorova michero senge cherries uye mazambiringa akaomeswa muRamu nezvinonhuwira, asi haufanire kunetseka nezve kubheka zvako pachako pazororo rako sezvo dhizeti iyi iri nyore kuwanikwa mukati megore rose. Kana iwe ukafamba panguva yeKisimusi kana mwaka wezororo zvakadaro, iwe unozokwanisa kuve nezvakawanda kudarika kwako kuzadza kweichi chinonaka kurapwa chinowanzo kuve chinosanganisira Bajan rum.
Shanu dzakakurumbira Bajan zvinwiwa
mufananidzo neruremekedzo rweBrent Hofacker - Shutterstock.com
Iwe hauna kuyedza rum punch kusvikira waedza rum punch muBarbados, kana zvirinani ndizvo zvinozotaurwa neveko. Waste hapana nguva yekukakavara nevatengesi, kana chero munhu wepachitsuwa, kwaungawana yakanakisa rum punch. Ingorayira uye unwe. Hazvina mhosva kuti iwe unoraira kupi, une chokwadi chekubvuma kuti rum punch muBarbados inonaka chose uye inozorodza. Ndezvipi zvimwe zvaungade panguva yako yezororo yeCaribbean?
Unoda kunakidzwa isina muganhu Rum Punch pamhenderekedzo kana padziva rekushambira? Vaenzi ve Shangu dzese-dzinosanganisira nzvimbo dzekugara muBarbados tora risingagumi siginicha cocktaile uye zvimwe zvinwiwa. Zvese zvakagadzirwa nevakanaka kwazvo bartenders pachitsuwa, vachishandisa premium brand doro.
mufananidzo nerubatsiro rweShyripa Alexandr - Shutterstock.com
Sezvo inowanzo kuve inovava zvishoma, Mauby ndechimwe chezvinwiwa izvi unosemesa kana kuda zvisingaite. Iko hakuna pakati, asi ichi chinwiwa zvirokwazvo chakakodzera kuyedza kwechokwadi kuravira kweBarbados. Zvinosanganisira mauby zvinosanganisira mauby bark, sinamoni, uye nutmeg. Vemunharaunda vanotenda kuti kune akati wandei hutano mabhenefiti emauby, kusanganisira cholesterol kuderedzwa, kurapwa kweArthritis, nezvimwe.
Kana iwe ukaenda kuBarbados kwakatenderedza nguva yeKisimusi, ginger doro ndechimwe chezvinhu izvo zvaunogona kupihwa kwese kwaunoenda. Kunyangwe iri inofungidzirwa nevamwe sechinwiwa chezororo, unogona kuiwana pane dzimwe nguva dzegore. MuBarbados, ichi chinwiwa chisiri chidhakwa chinogadzirwa nejinja, shuga, mvura, uye muto wemonimu. Inowanikwa mune dzakakanganiswa kana dzisiri-kabhoni shanduro.
mufananidzo nerubatsiro rweAlp Aksoy - Shutterstock.com
Chimwe chinwiwa cheKisimusi chakakurumbira, sorrel ine zvakawanda zvehutano mabhenefiti aunokoshesa, kunyanya sezvo zvichitapira kutanga nazvo. Sorrel iri Yakagadzirwa kubva pamashizha akaomeswa eiyo sorrel ruva (hibiscus), iyo inotendwa batsira kuderera kweropa uye ndozvazvakaitawo ane mavitamini akawanda uye zvicherwa. Zvimwe zvinoshandiswa zvinosanganisira clove, ginger, uye shuga. Kunyangwe ichinyanyo kufarirwa panguva dzezororo, iwe unogona achiri kuwana sorrel kune zvimwe zvitoro zvemuno pane dzimwe nguva dzegore.
mufananidzo neruremekedzo rweS_Photo - Shutterstock.com
Mabhangi Beer akaita basa rakakurumbira nekutengesa pamusoro pemakore, zvakanyanya zvekuti ungatomboziva zita redoro iri paunosangana naro muBarbados. Mabhangi Doro rakakurumbira muBarbados pachokwadi, zvekuti rinoonekwa sevamwe chiratidzo chenyika. Urongedze mumahombekombe ako anotonhorera pamwe chete nezvimwe zvinwiwa zvako kuti uve nechimwe chinhu chinotonhora uye chinozorodza kupururudza kunze mushana.
Waizviziva here? Shangu dzeRoyal Barbados inouya neiyo bowling alley uye yekudyira doro bhawa, inoshandira 19 doro kubva kupasirese pasirese - yemahara, isina muganho. Zvese zvinwiwa zvinosanganisirwa mukugara kwako!
Ndeipi doro inozivikanwa neBarbados?
Barbados inozivikanwa zvakare se "Iyo Rum Island", izvo zvinoita kuti zvinyanye kupfuura pachena kuti chii chakakurumbira chinhu kunwa chiripo: rum! Izvi zvakaenzana neRum punch uye yakawanda yazvo sezvo iwe ungangove unokwanisa kutaurira kurudyi kubva kubheti apo iwe uri kusefa pane yako yekugamuchira rum punch chinwiwa, uye sampling rum punch yakakosha pamabhawa emuno.
Ona zvimwe Bharabhasi inozivikanwa.
Chii chiri chikafu chenyika cheBarbados?
Chikafu chenyika cheBarbados ndiCou Cou neFried Flying Fish. Chechipiri mukuzivikanwa ndeye pudding uye souse, asi sekune zvimwe zvese chikafu chemaJagan, zvese zvinoenderana neyako wega kuravira, uye zvauri kutsvaga.
Ndeipi yakanakisa nzvimbo muBarbados yesarudzo dzinoshamisa dzechikafu?
Ese-anosanganisira maresitoreti senge Shangu dzeBarbados ndiwo sarudzo huru kana kudya uye kuva nezvakawanda zvekudya sarudzo chikamu chakakosha chezororo rako. Sandals Barbados inopa vashanyi chikafu chisingagumi uye zvinwiwa 7 mabara, kusanganisira yekushambira-kumusoro mabara, uye gumi nematanhatu maresitorendi. Izvo chete hazviwane chero zvirinani pane izvo kana zvasvika pakuva nesarudzo dzakawanda kwazvo dzinoshamisa munzvimbo imwechete muBarbados!